वर्षेनी बढ्दो प्राकृतिक विपत्ति, विपदबाट कुन वर्ष, कति क्षति ? यस्ताे छ विवरण - Kantipath.com
काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षयता मनसुनजन्यसहित विपद्का घटना बढ्दो छ । एक दशकको तथ्याङ्क हेर्दा विसं २०७२ सम्म विपद्का दुई हजारभन्दा कम घटना भएका थिए । विसं २०७३ पछि विपद्का घटना क्रमशः दुई हजारबाट उकालो लागेकामा पछिल्ला केही वर्ष (विसं २०७५–२०७७) मा भने चार हजार बढी प्राकृतिक विपत्ति निम्तिए ।
Previous Previous post: दोलखामा माओवादीको पार्टी कार्यालय बनाउने अभियान : आधा घण्टा मै साढे ६ लाख
Next Next post: सरकारलाई माओवादी केन्द्रले भन्यो : भारतसँग गम्भीर आपत्ति जनाऊ
नेपाल टेलिकमले ल्यायो नयाँ आकर्षक अफर
श्रीस्वस्थानी व्रतकथा: कसरि ब्रत बस्ने? के के छन् नियम ?
नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत कलाकार निशा घिमिरेको मृत्यु
नेकपाको बैठकमा सिमानामा काँडेतार र पर्खाल लगाउने विषयमा छलफल
भरतपुर महानगरपालिका– १९ फरक÷फरक शैलीमा निर्वाचनको प्रचारप्रसार